Murrashaxa WADDANI oo Ugu Baaqay Codbixiyeyaasha inay Taageeraan Isbeddelka iyo Horumarka Xisbigoodu Wado | Dhamays Media Group
Murrashaxa WADDANI oo Ugu Baaqay Codbixiyeyaasha inay Taageeraan Isbeddelka iyo Horumarka Xisbigoodu Wado
“Ma ahayn in KULMIYE cod idiin soo doonto ee waxay ahayd inuu wejiga maro ku duubto oo khajilaad la dhuunto, laakiin waxay ogyihiin in aynu nahay mujtamac hab qabiil u dhisan oo ilawshiyo dhow” Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro)
Hargeysa (Dhamays) – Murrashaxa Madaxweynaha ee xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa ugu baaqay muwaadiniinta codbixiyeyaasha ah ee reer Somaliland inay taageeraan isbeddelka iyo horumarka uu wado xisbiga WADDANI si xal loogu heli dhibaatooyin uu xusay in xukuumadda KULMIYE sababtay muddada ay xilka haysay.
Md. Cabdiraxmaan Cirro oo khudbad ka jeediyey fagaaraha Beerta Xoriyadda ee caasimadda Hargeysa oo ay buux-dhaafiyeen taageerayaasha xisbiga WADDANI shalay, waxa uu tilmaamay in doorashada Madaxtooyadu tahay mid ay muwaadiniintu ku kala dooranayaan mustaqbal fiican iyo mustaqbal liita.
“Cod dheer waxaan ugu baaqayaa shacbiga Somaliland, waxaan leeyahay maanta waa dharaar aad kala dooranaysaan mustaqbal iyo meel la’aan, waa dharaar aynu hiil u doonayno qaran ina wada deeqa, waa dharaar aynu ka hiilin doono qoqobka iyo kala qaybinta codka la idinkaga doono.
Waxaan dib idiin xusuusinayaa ballanqaadyadii KULMIYE ee buray xagay ka baxday waxbarashadii bilaashka ahayd sidee maanta yahay adeegyada caafimaadku, dayaca ciidammadu heerka uu gaadhay, musuqmaasuqa xadka goostay, ictiraafka rubuc qarniga aad naawilayseen ee iridaha loo laabay, waxaan idin xusuusinayaa sicir-bararka iyo aafada maanta socota ee dhaqaaleyahannada KULMIYE u taag la’yihiin inaanu hoggaamiye millatari ahina taag iyo tamar midna u hayn,” ayuu yidhi murrashaxa WADDANI.
Waxaannu intaas ku daray; “Waxaan idin xusuusinaya hantida ummadda ee la xaraashay iyo dulaynta loo geystay nidaamka dawladnimo. Waxa ayaan-darro ah in baqaha KULMIYE cabsi ku riday shacbiga doorashada, kuna kalifay kala qaybinta shacbiga. Hargeysa aniga mid baad ii tahay, caasimadda dalka ayaad ii tahay, codkiina oo midaysan baan doonayaa. Codkiina ugu hiiliya xisbiga rajada shacabka ee isbeddel-doonka WADDANI.”
Md. Cabdiraxmaan Cirro, ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyin uu sheegay in xukuumadda KULMIYE sabab u ahayd, waxaannu yidhi; “Walaalayaal, bal aynu eegno dhibaatooyinka waaweyn ee ina haysta oo isugu jira kuwo KULMIYE abuuray iyo kuwo hore u jiray oo KULMIYE xalin kari waayey, ugana sii daray. Dhibaatooyinkaa oo xalintoodu u baahan tahay sannado badan oo shaqo ah waxay isugu jiraan kuwo caasimadda Hargeysa gaar u ah, iyadoo waddanka intiisa kale uu la qabo. Walaalayaal, aniga oo arkaya inaad milic taagan tihiin, haddana milicda waxa ka sii kulul duruufaha gacan ku samayska ah ee dawladdnimada xumaatay ka dhashay ee aynu la noolnahay.”
“Arrinteenu maanta maaha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo, laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo in waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro, waa hiil loo hiilinayo midnimada iyo isku duubnida ummadda guud ahaan oo laga hiilinayo falsafadda KULMIYE ee laba gacmood isku dhiib ama qori isku dhiib.
Walaalayaal, maanta ma’ahayn in KULMIYE cod idiin soo doonto waxay ahayd inuu wajiga maro ku duubto oo uu khajilaad la dhuunto, laakiin waxay ogyihiin in aynu nahay mujtamac hab qabiil u dhisan oo ilawshiyo dhow, waxay isku dayayaan inay indho sarcaad idiin dhigaan oo beenta idiinku soo celceliyaan. Waxa tusaale idiinku filan sidii uu waddanku ahaa toddoba sanno ka hor, bal waxaad dib-u-xasuusataa halka ay joogtay toddoba sanno ka hor midnimadeenu, halka ay joogtay dawladdnimadeenu, rajadeena ictiraafka iyo maanta halka ay marayso, sicir-bararka, musuqmaasuqa iyo kala qoqobka dadweynuhu,” ayuu yidhi murrashaxa xisbiga WADDANI.
Md. Cabdiraxmaan Cirro, ayaa sidoo kale u mahadceliyey taageerayaasha xisbiga WADDANI ee muddada dheer cadceeda u taagnaa, waxaannu yidhi; “Waxaan idiinka mahadcelinayaa inaad taagan tihiin saacado badan, una dulqaadateen inaad cadceeda taagan tihiin. Waxaan doonayaa in aan maanta la hadlo shacbiga caasimadda Somaliland, waxaan farriin u dirayaa shacbiga Somaliland aqlabiyadda iyo bulsho weynta isbeddel-doonka ah ee maanta dalka meel kasta bannaanada u taagan muujinta dareenkooda.
Waa maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka madaxtinimada dalka, maanta oo Isniin ah waxay kow u tahay banaan baxyada badbaadada qaranka, waxay kow u tahay shacabka rajo doonka ah, waxay kow u tahay maalmaha innooga hadhay doorashada, waxay kow u tahay dib u soo noolaynta yididiilada dalka, waxay kow u tahay bahweynta isbeddel-doonka ee xisbiga rajada shacbiga ku midoobay.”
Previous: Somaliland: Taageerayaasha Xisbiga WADDANI oo Dhoola-tus ku soo Bandhigay Fagaarayaasha Magaalooyinka Dalka
Next: Komishanka Doorashooyinka oo Amarro Culus ka soo Saaray Dhaqdhaaqyada Ololaha Xisbiyada